पूरै फिनिस कम्पनी नोकिया को काम को सराहना गर्न, तपाईँले कम्तीमा दुई वा यसको उत्पादन उपकरण तीन सिक्न आवश्यक छ। परीक्षण devaysa रूपमा लोकप्रिय मोबाइल फोन नोकिया (बटन) C2-05 लाग्न सक्छ। यो मोडेल यसको भित्री असाधारण भर्नको छ रूपमा साथै, बाह्य मापदण्डहरु मा एकदम रोचक छ।
तपाईं बक्समा यस फोन खरिद गर्दा उपभोक्ता चार्जर, हेडसेट, हैंडसेट नै र मार्गदर्शन हुनेछ।
उपकरण एउटा सानो पदचाप छ, यो एकदम संकुचित र प्रयोग गर्न सजिलो छ। मानिसहरू, पाम तुलना गर्दा, फोन पूर्णतया यो मा "जोडतोडले" छ। यसको वजन - 98 ग्राम, आयाम -। 9,9h4,7h1,6 देख्ने उपकरण अलिकति स्टाउट छ कि धेरै संभावित खरीदारों रोक्छ। आदर्श - एक स्लाइडर, त्यसैले उहाँलाई लागि यो मोटाइ - तर, हामी यो उपकरण कि सम्झना गर्नुपर्छ।
डिजाइन द्वारा, यो फोन कि अन्तमा गर्न सकिन्छ नोकिया C2-05 थप पुरानो मानिसहरूलाई भन्दा साना पुस्ता लागि डिजाइन। को मूख्य रंग पर्याप्त उज्यालो र रसदार छन् भन्ने तथ्यलाई। कालो, गुलाबी र नीलो: बजार मा एकैचोटि तीन विकल्प सिस्टम पाउन सकिन्छ।
यो समीक्षा कालो संस्करण स्पर्श हुनेछ। प्यानल देखि उच्च गुणवत्ता प्लास्टिक बनेको छ। चमक लगभग कुनै (केवल कल स्क्रिन र चाबी नजिकै उपलब्ध) छ। लाभ एक मैट समाप्त दिइएको थियो। यो पनि यसको लाभ छ। उदाहरणका लागि:
कम अक्सर एक परिणाम एक स्क्राच वा दाग प्राप्त गर्न सक्छन् जो को रूप मा, यांत्रिक तनाव subjected।
सफा - यो सतह को मुख्य एक।
रंग त प्रबन्ध छन् कालो तल शरीर प्यानल शीर्ष गाढा खैरो छाया रूपमा प्रयोग गरिन्छ। Nokia S2-05 को गठन गुणस्तर र सामाग्री को लागि एक ठोस शीर्ष पाँच योग्य हुनुहुन्छ। को backlash छैन अवलोकन छ, squeaks र त wobble। संरचना एक स्लाइड संयन्त्र भए तापनि, यो अझै पनि अखंड प्रभाव महसुस गरिएको छ। बन्द र खोल्ने, फोन एक बल्लतल्ल श्रव्य क्लिक बाहिर दिन्छ। त्यहाँ पहिले नै बनाउने माध्यम आधा बाटो नै महसुस गर्ने avtodovodki।
फोन नोकिया (बटन) एक एलसीडी डिस्प्ले संग सुसज्जित छ। यसको विकर्ण2इन्च छ। यो 65 हजार रंग समर्थन गर्दछ। संकल्प - 240x320 पिक्सेल। चमक बलियो छैन, यो सेटिङ परिवर्तन हुँदैन, र रंग धेरै उज्ज्वल छैन। सूर्य अन्तर्गत अन्धो अन्तरालहरू देखा, तर पाठ पठनीय रहनेछ।
तपाईं लामो यो एकाइ आनन्द उठाएका मानिसहरू को समीक्षा विश्वास छ भने, स्क्रिनमा खरोंच यो एक विशेष सुरक्षा प्लास्टिक ढाकिएको छ, किनभने अक्सर देखिन्छन्।
फोन नोकिया C2-05, जसको लागि निःशुल्क उपलब्ध छ अद्यावधिक फारम मा फर्मवेयर, 40. डेस्क लेबल मोबाइल संचार र चार्ज सुसज्जित छ शृंखला मा चल्छ। साथै, तपाईं मिति र समय हेर्न सक्नुहुन्छ। विजेट यो एकाइ को स्क्रिनमा असामान्य छैन। यसलाई खुला, मल्टिमिडिया, इमेल, खोज, एउटा घडी, एक स्टपवाच, लिंक सेट कुराकानी, कल इतिहास र अन्य आवेदन सम्भव छ। मेनु विशेष नेभिगेसन कुञ्जीहरू प्रयोग गरिएको छ।
को लक स्क्रिनमा छ केही नयाँ मालिक हेर्न गर्दैन रूपमा बस केही मा प्रदर्शित छ। डिजाइन मानक नोकिया C2-05 खरीदार गरेको विवेक, साथै प्रदर्शन छविको पृष्ठभूमिमा परिवर्तन गरिएको छ।
फोन स्मृति तपाईं एक हजार सम्पर्क गर्न अनुमति दिन्छ। प्रत्येक व्यक्ति5फोन सम्म बचत गर्न सक्नुहुन्छ। जो, तपाईं एउटा नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र नाम प्रत्येक क्षेत्र पाठ मात्र 50 वर्ण, दिइएको छ देख्न सकिन्छ जब सिद्धान्त मा, सधैं छ। एक विशेष सदस्य लागि यसको आफ्नै लय र एक तस्वीर सेट गरिएको छ। कार्ड र नोकिया C2-05 स्मृति दुवै को संख्या।
सूची पहिलो वा थर द्वारा वर्णमाला क्रममा सुसज्जित गर्न सकिन्छ। जो संग खोज सजिलो इच्छित सम्पर्क खोज्न पनि छ।
यो मेनु सबै कल समावेश: छुटेका, आगमन, बहिर्गमन गोल गरेका थिए। यहाँ फेला पार्न कल को कुल अवधि, केही व्यक्तिगत सदस्य, पठाइएका सन्देशहरू संख्या, र अन्य जडानहरू संग कुराकानी को अवधि हुन सक्छ। साथै, त्यहाँ एक speakerphone छ। यो पढ्न सकिने, एकदम राम्रो छ। नोकिया C2-05 समर्थन थप एक सुविधा - कुराकानी रेकर्ड। छैन ठाँउ बाहिर गति डायल को परिचय थियो। 8 संख्या यो अप प्रत्येक कुञ्जी लेखिएको गर्न सकिन्छ। उपभोक्ताहरु को समीक्षा द्वारा न्याय, यो सुविधा एकदम लोकप्रिय छ।
केही वर्ष पहिले, म सन्देशहरू लागि वर्दी डिजाइन भएको थियो। पत्राचार फोल्डर वा संवादमा एक विशेष सम्पर्क समूहीकृत छ। यति सजिलो, कुराकानीमा इतिहास हेर्ने अधिकार जानकारी खोज्न। फोन एसएमएस र एमएमएस सन्देशहरू समर्थन गर्दछ। दोस्रो विकल्प सिर्जना गर्न, तपाईंले एक चलनअनुसारको सन्देश रिङटोन, फोटो, भिडियो सम्मिलित गर्न आवश्यक छ। उपकरण नै एमएमएस गर्न सन्देशको ढाँचा परिवर्तन हुनेछ। फन्ट, यसको आकार अधिक सही, तपाईं सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
एसएमएस आफ्नो पात्रो, सम्पर्क मा डाटा देखि हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन, र यति मा। डी तिनीहरूलाई ई-मेल वा नियमित फोन नम्बरमा अनुमति पठाउनुहोस्।
ई-मेल मा काम गर्न सही थियो र malfunctions देखाउन थिएन, तपाईं निर्माता द्वारा स्थापित एक "मूल" अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुपर्छ। यो यस्तो Mail.ru र Gmail.com मेल सर्भर, सबै ज्ञात स्रोतहरू समर्थन गर्दछ। म ठ्याक्कै कुनै समस्या तिनीहरूलाई के। फोन कुनै पनि सन्देश स्वीकार गर्न सक्षम छ, तथापि, समस्या हेर्दै यो हुन सक्छ। सबै उपकरण को सर्वश्रेष्ठ ग्राफिक्स शीर्षकमाथिको छन्।
मात्र 0.3 मेगापिक्सेलको - त्यहाँ एक क्यामेरा छ, तर यो बरु कमजोर छ। यसलाई सजिलै मेनु सिस्टम मार्फत पाउन। डिजाइन त सजिलो यसलाई बुझ्न धेरै सहज छ। सुरक्षित फोटो फोनमा र microSD मा दुवै हुन सक्छ। छवि मालिक इच्छा वा स्वतः रूपमा या त नाम हुनेछ। यो प्रभाव केही सेट गर्न सम्भव छ।
रिंगटोन सूची वर्णमाला क्रममा, विधा, नाटकहरू, एल्बम र गायक को संख्या मा क्रमबद्ध गरिएको छ। तपाईं प्लेसूचीहरू जो अनुक्रम वा अंधाधुंध गीतहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। गीत प्लेब्याक स्क्रीन डिस्प्ले एल्बम तस्वीर (यदि निर्दिष्ट), कलाकार को नाम, जारी को वर्षमा। को उल्टाउँदै ध्वनि परिवर्तन र गीतहरू विशेष कुञ्जी प्रयोग हुन सक्छ।
फोन एक रेडियो समर्थन छ। छालहरू सबै किसिमका सूची 20 टुक्रा भन्दा कुनै थप समावेश गर्न सक्छ। तिनीहरूले स्वचालित खोज र स्वयं पछि फिर्ता थपिएका छन्। यसबाहेक, मेनु को यो खण्ड डेस्कटपमा गरे गरिनेछ।
"मेरो फोटो" - जहाँ सबै कब्जा तस्बिरहरू क्यामेरा मा अवस्थित छ फोल्डर। त्यहाँ एक स्लाइड शो समारोह, जो एक प्रयोगकर्ता (3 10 सेकेन्ड) को गति समायोजन गर्न सकिन्छ। अर्डर छवि वृद्धि गर्न, तपाईंले जो मामला मा यो स्क्रिनमा प्रकट हुनेछ, यसमा क्लिक गर्न आवश्यक छ। सामान्य अवस्थामा फर्कन, तपाईं नै हेरफेर गर्न पर्छ।
भिडियो कुनै पनि स्थिति अवलोकन गर्न सकिन्छ: ठाडो र तेर्सो। यो इमेल, एमएमएस र ब्लुटुथ द्वारा फाइलहरू पठाउन सम्भव छ।
ब्राउजर - आफ्नो फोन को लागि एक कार्यक्रम नोकिया C2-05, आपूर्तिकर्ता द्वारा सेट गरिएको छ जो। यो एकाइ - यो ओपेरा मिनी छ। यो कम्पनी एक फरक प्रविधी मा सेट गरिएको छ। फोन छैनन्3जी, त्यसैले तपाईं पनि छिटो लोड पृष्ठ कुरा गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ब्राउजर नै सेटिङ राम्रो नम्बर छ। को इंजेक्शन परीक्षण धेरै बिस्तारै बाहिर छ हुनत, टेलिफोन ग्राफिक तत्व को उच्चतम नम्बर पनि सबै भन्दा कठिन साइटहरु देखाउन osilivaet। इन्टरनेट फोन मा निम्ति - यो एकदम उपयुक्त विकल्प छ, महत्त्वपूर्ण छैन।
कुराकानीमा वक्ताले राम्रो प्रकाश मा आफूलाई प्रकट - ग्राहक समीक्षा द्वारा प्रमाणित रूपमा interlocutor, राम्रो सुने छ। मेलोडी पनि चर्को, तर यदि एउटा हल्ला ठाउँमा फोन छल्ले, यो अझै पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक कम्पन समारोह (यसको औसत शक्ति) हो।
कम्पनी को लोकप्रियता, राम्रो गठन, उच्च गुणस्तरीय सामाग्री, सरल र सहज इन्टरफेस - सबै उपकरणहरू "नोकिया" को सबैभन्दा लाभप्रद भाग। यो उपकरणको मूल्य मात्र 3000 rubles छ। घरमा आफ्नो फर्मवेयर अद्यावधिक धेरै सजिलो छ, त्यसैले यसलाई नोकिया C2-05 लागि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दा मद्दत लागि सेवा सम्पर्क गर्न आवश्यक छैन। RM 724 - यो मोडेल को लागि सबै भन्दा उपयुक्त छ कि संस्करण।
तपाईं किनमेल सफल!
सुझाव र चाल: कसरी म विन्डोज फोन एन्ड्रोइड सम्पर्क हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ
Com.android.phone: सञ्चालन प्रणाली त्रुटि। म कसरी समाधान गर्न सक्छन्?
स्मार्टफोन एसस ZenFone जाओ ZC500TG: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों
रक: रक निर्देशन। हार्ड रक। पङ्क रक
"मेगाफन" इन्टरनेटमा कसरी स्थापित गर्ने? बस समाधान गर्न गाह्रो ...
होटल पटाङ्गिनी (Halkidiki, ग्रीस): एक अवलोकन, सुविधा र समीक्षा
गुप्तचर सिरियल फिलिम "Zhurov"। अभिनेता, निर्माताहरू, कथा
मूल व्यञ्जनहरु: चौंकानेपालहरु मा skewers
पनीर बल, तेल मा तला
आयरन बर्क I500: अपरेसन निर्देशनहरू, प्रयोगकर्ता समीक्षाहरू
Bonbonnieres आफ्नै हातले के
भाषा र भाषण शैलीहरू को शैली। कार्यात्मक भाषा शैलीहरू